Lenovo Z6 Pro: Qeexitaannada, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah | Androidsis
Eder Ferreno | | Lenovo, Mobiles
Toddobaadyadan la soo dhaafay waxaan helnay warar badan, oo ku saabsan qaab xan, ku saabsan Lenovo Z6 Pro. Taleefanka cusub ee sumadda Shiinaha ayaa lahaa bandhigga waxaa loo qorsheeyay Abriil 23. In yar ayaan u baranay dhinacyo cusub oo ku saabsan telefoonka, sida dhibcahaaga Antutu. Ugu dambeyntiina, dhamaadka-dhamaadka sare ee sumadda Shiinaha hadda waa rasmi.
Sidaa darteed, waxaan horeyba u ogaanay dhammaan faahfaahinta ku saabsan Lenovo Z6 Pro. Dusha sare ee kaladuwan, awood leh oo leh kaamirooyin sida mid ka mid ah awoodeeda, iyada oo ay ugu wacan tahay isku dhafka afar muraayadaha indhaha, sida lagu xaqiijiyay usbuucyadan la soo dhaafay. Taleefan ay tahay in lagu xisaabtamo meelaha sare.
Lenovo waa summad dad badani ogyihiin, in kasta oo aysan ka mid ahayn kuwa ugu iibka badan Yurub. Waqti ka dib waxay lumisay joogitaanka suuqa, sidoo kale Shiinaha. Laakiin taleefankan waxay muujinayaan inay ku soo bandhigi karaan wax xiiso weyn u leh dhamaadka-sare ee Android. Maxaan ka filan karnaa taleefankan?
Lemeng Mobile: Nooca Cusub ee Lenovo
1 Tilmaamaha Lenovo Z6 Pro
Tilmaamaha Lenovo Z6 Pro
Naqshadeynta Lenovo Z6 Pro ayaa loo hayaa iyadoo loo eegayo isbeddellada suuqa. Sidaa darteed, waxaan ka helnaa shaashad leh nooc biyo ah. Dareeraha sawirka faraha ayaa lagu dhex daray shaashadda taleefanka, maaddaama aan wax badan ku aragno baaxadda sare. Sidoo kale, waxaan ku haynaa afar dareemayaal dhabarka, kamaradaha. Kuwani waa faahfaahinta buuxda ee taleefanka:
Screen: 6,39-inch OLED oo leh xallinta pixel 1080 x 2340 iyo saamiga 19.5: 9
Gacaliye: Qualcomm Snapdragon 855
Kaydinta: 128/256/512 GB (la ballaarin karo illaa 512 GB oo leh microSD)
Kaameerada hore: 32 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Cámara trasera: 48 oo leh f / 1.8 + 16 MP oo leh aperture f / 2.2 xagal aad u ballaaran + 8 MP oo leh aperture f / 2.4 telephoto + 2 MP oo leh aperture f / 1.8 video iyo dareeraha TOF
Batariga: 4.000 Mah oo leh lacag degdeg ah 27W
Nidaamka hawlgalka: Android 9 oo leh ZUI 11 oo ah lakab habeyn ah
Xuduudaha kala duwan: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C, Dual GPS, LDAC
kuwa kale: Dareenka faraha ee shaashadda, Dolby Panoramic Sound, minijack
Cabbirada: 157.5 x 74.6 x 8.65 mm.
Peso: 185 garaam
Lenovo Z6 Pro wuxuu la yimaadaa shaashad ballaaran, oo shaki la'aan bixisa khibrad aad u liidata marka aad wax cunayso. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay u heellan tahay guddiga OLED, oo bixiya isticmaalka tamarta hooseeya. Loogu talagalay processor-ka, kan ugu awoodda badan suuqa, isagoo ah Snapdragon 855 midka la doortay. Sidoo kale waxaa xusid mudan 4.000 mAh baytari oo awooda taleefanka, kaas oo bixiya ismaamul wanaagsan.
Kaamirooyinka ayaa ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan. Tan iyo tan tan Lenovo Z6 Pro waxay isticmaashaa afar kamaradood oo gadaal ah. Isku darka dareemayaasha ugu awoodda badan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad sawirro ka qaadatid dhammaan noocyada xaaladaha. Isku-dhaf aad u xusuusinaya Huawei P30 Pro. Maaddaama ay jiraan saddex dareemayaal iyo dareeraha TOF afraad, oo u shaqeeya sidii taageero loogu talagalay kamaradaha kale ee taleefanka.
Hadda, Lenovo Z6 Pro ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha. Shirkaddu kamay odhan wax ku saabsan taleefanka caalamiga ah ee la bilaabay. In kasta oo taleefannada casriga ah ee noocyadu sida caadiga ah laga bilaabo Yurub. Marka waxay u badan tahay inaan dhowaan heli doonno macluumaad cusub oo ku saabsan imaatinkiisa suuqa Yurub. Laakiin waa inaan sugnaa in yar.
Kuwa xiiseynaya, waxaa loo bilaabay laba midab oo kala duwan: buluug iyo casaan. Sida noocyada, waxaan ka helnaa dhowr nooc oo ah Lenovo Z6 Pro, iyadoo kuxiran RAM iyo keydinta gudaha. Qiimaha mid kasta oo ka mid ah noocyadan ku yaal Shiinaha horeyba waa rasmi:
Moodhalka leh 6/128 GB wuxuu ku kici doonaa 2.899 yuan (qiyaastii 385 euro si loo beddelo)
Nooca leh 8/128 GB waxaa lagu qiimeyn doonaa 2.999 yuan (qiyaastii 397 euro isbeddelka)
Nooca leh 8/256 GB wuxuu ku yimaadaa qiimo ah 3.799 yuan (qiyaastii 503 euro in la beddelo)
Qaabka leh 12/512 GB waxaa lagu qiimeeyaa 4.999 yuan (qiyaastii 660 euro in la beddelo)
Waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ka maqalno soo bandhigideeda waxyar. Sidoo kale in la ogaado haddii dhammaan noocyada taleefankan laga bilaabi doono Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Lenovo Z6 Pro: Nooc cusub oo heer sare ah